Akaroverwa kuita mimba | Kwayedza
Akaroverwa kuita mimba
28 Sep, 2018 - 00:09	 2018-09-27T12:15:05+00:00 2018-09-28T00:00:18+00:00 0 Views
MURUME wekuChitungwiza akapihwa mutongo wekubvisa faindi ye$150 nedare reko apo akabatwa nemhosva yekurova mudzimai wake mushure mekunge amuudza kuti akanga ava nepamuviri.
Simbarashe Silomonye (42) wepanhamba 8415 Unit K akatongwa nenyaya yemhirizhonga (Domestic Violence Act Chaper 5:16) nekuda kwekurova kwaakaita mudzimai wake, Sizalokhuwe Mulauzi (24).
Mutongi wedare reChitungwiza Magistrates’ Courts, Yeukai Chigodora, akapa Silomonye chirango chekubvisa faindi ye$150 uye kukundikana kwake onogara mujeri kwemwedzi uzere. Pakumira kwaakaita mudare, Silomonye anobvuma mhosva yake. Muchuchisi Edmond Ndambakuwa anoudza dare kuti nomusi wa6 Chikunguru gore rino munguva dzemanheru, pakamuka kusawirirana pakati pevaviri ava mushure mekunge Mulauzi audza murume wake kuti akanga ava nepamuviri pake.Silomonye akaudza mudzimai wake kuti abude mumba umu asi akaramba. Akabva adhonza ruoko rwake rwerudyi achibva amukanda mambama kumeso kanokwana kana zvikaita kuti azvimbe.
Magwaro ekwachiremba akarapa Mulazi akabuda mudare iri seumboo.